कसरी एक प्रभावकारी अनलाइन मार्केटिङ रणनीति बनाउने - Victor Mochere
by क्याथी पेना
केहि अनलाइन प्रवृतिहरू आउँछन् र जान्छन्, जस्तै केहि सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू। सबै अनलाइन मार्केटिङ प्रवृत्तिहरू समान रूपमा सिर्जना गरिएका छैनन्। कोही बाहिर जानेछन्, र कोही आउँछन् र जानेछन्, तपाईंले त्यहाँ आफ्नो फलोअर बढाउनमा लगानी गर्नुभएको कुनै पनि बहुमूल्य समय लुटिएको महसुस गर्दै। यदि तपाईंसँग समय कम छ भने, पहिलो, तपाईं एक्लै हुनुहुन्न। र दोस्रो, तपाईलाई फोकस गर्नको लागि उत्तम अनलाइन मार्केटिङ रणनीतिहरू कालातीत हुन्।
यी तपाईंको समयको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग हुन्। कालातीत सुझावहरू ती हुन् जसले बोर्ड भर काम गर्दछ। यो कुन वर्ष हो, हामी कुन गुगल रिलिजमा छौं, वा फेसबुकको एल्गोरिदममा के भइरहेको छ भन्ने कुराले फरक पर्दैन। तिनीहरू सरल तर प्रभावकारी छन्, र धेरै कम जोखिम। यस लेखमा, हामीले प्रभावकारी अनलाइन मार्केटिङ रणनीति बनाउन मद्दतको लागि कालातीत सुझावहरू हाइलाइट गरेका छौं।
3. केवल आफ्नो अवतार जान्छ जहाँ जानुहोस्
पहिलो नजरमा तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि संचार मार्केटिंग भन्दा ग्राहक सेवा हो, तर यो वास्तवमा दुबै क्याम्पहरूमा पर्दछ। जब तपाइँ स्पष्ट, मैत्री र सहयोगी संचार दिनुहुन्छ तपाइँ विश्वास निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ - जुन भविष्यको बिक्री गर्न आवश्यक छ। यो पनि सत्य हो कि मानिसहरू आफ्ना साथीहरूलाई राम्रो भन्दा ब्रान्डको साथ खराब अनुभवको बारेमा बताउन धेरै उत्सुक छन्। त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि यदि मानिसहरूले तपाईंको बारेमा कुरा गरिरहेका छन् भने, यो मात्र राम्रो छ।
किनभने मुखको शब्द एक अद्भुत, शून्य लागत मार्केटिङ उपकरण पनि हुन सक्छ। राम्रो संचारले तपाईका उत्पादन र सेवाहरूमा मानिसहरूलाई मात्र बेच्दैन। यसले उनीहरूको अपेक्षाहरू पनि सेट गर्दछ। विचार यो हो कि तपाईंले कसैको पैसा लिनु हुन्न र त्यसपछि पोस्टमा उनीहरूको खरिदको अपेक्षा कहिले गर्ने भनेर तिनीहरूलाई थाहा नदिनुहोस्, उदाहरणका लागि। जब तपाइँ अपेक्षाहरू सेट गर्नुहुन्छ तब तपाइँ धेरै कम गुनासोहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, र धेरै प्रशंसा प्राप्त गर्नुहुन्छ, जुन तपाइँ चाहानु भएको मुखको शब्द सहित। राम्रो मार्केटिङ संचार हो:
अपेक्षाहरू सेट गर्दछ
बोनस अंकहरूको लागि, यसले 80/20 नियम पछ्याउँछ
यदि तपाईं 80/20 नियमसँग परिचित हुनुहुन्न भने, यो सामग्री मार्केटिङको मुख्य सिद्धान्त हो। अन्य शब्दहरूमा, हामी सामग्रीको साथ नेतृत्व गर्छौं र बिक्रीको साथ 80/20 को अनुपातमा अनुगमन गर्छौं। छोटकरीमा, जब हामी यो गर्छौं हामी पाठकको लागि मूल्यको साथ हाम्रो मार्केटिङ संचारको नेतृत्व गर्दैछौं, त्यसपछि हाम्रो लागि मूल्यको साथ लपेट्दै। हामी तिनीहरूलाई कथा सुनाउँछौं, तिनीहरूलाई पाठ सिकाउँछौं वा तिनीहरूलाई थोरै मनोरञ्जन दिन्छौं। त्यसपछि हाम्रो सञ्चारको अन्त्यमा (इमेल वा सामाजिक पोस्ट सोच्नुहोस्) हामी हाम्रो CTA (कल टु एक्शन) बनाउँछौं।
यो आफै प्रयोग गरेर
यसलाई तपाईंको आफ्नै मार्केटिङ रणनीतिमा ल्याउनको लागि, एक साँच्चै बुद्धिमानी चाल भनेको प्रणालीहरू सेट अप गर्नु हो। आदर्श रूपमा तपाईको इमेल मार्केटिङको लागि सामग्री क्यालेन्डर, र प्रत्येक खरिदको साथ डेलिभरी विवरणहरू (सेटिङ अपेक्षाहरू) पुष्टि गर्न स्वचालित इमेल। तपाईंको उत्पादन वा सेवाहरू प्रवर्द्धन गर्ने नियमित इमेल मार्केटिङ पठाउन प्रतिबद्ध हुनुहोस्। तपाईंको इमेल न्यूजलेटरको फुटरमा, ग्राहक सेवा सोधपुछका लागि तपाईंको सम्पर्क जानकारी राख्नुहोस्।
तपाईलाई सम्पर्क गर्नको लागि तपाईको फोन नम्बर वा इमेल ठेगाना खोज्नु पर्दैन भने मानिसहरू खुसी हुनेछन्। एक सीधा रेखा को सट्टा एक चक्रीय प्रक्रिया को रूप मा संचार को बारे मा सोच्नुहोस्। तपाईंले आफ्ना ग्राहकहरूलाई आफ्ना प्रस्तावहरू नियमित रूपमा सञ्चार गर्न आवश्यक छ, र बदलामा, तिनीहरू कहिलेकाहीं तपाईंकहाँ आउन आवश्यक पर्दछ। तर तपाईले यसलाई जति धेरै सुविधा दिनुहुन्छ, त्यति नै तिनीहरूले भविष्यमा फेरि किन्नेछन्। यो सबै विश्वास र पारदर्शिताको बारेमा हो।
यो टिप मार्केटिङ comms को बारे मा अघिल्लो देखि राम्रो संग नेतृत्व गर्दछ। तपाईंका सबै इमेलहरू, र तपाईंले प्रयोग गर्ने सञ्चारको कुनै पनि अन्य तरिकाले तपाईंको कम्पनीको ब्रान्डिङ बोक्नुपर्छ। यसबाहेक, त्यो ब्रान्डिङले विश्वास व्यक्त गर्न मद्दत गर्नुपर्छ। जब ब्रान्डिङ राम्रोसँग गरिन्छ, यसले तपाईंको ग्राहकलाई सुरक्षित महसुस गराउँछ। तिनीहरूले महसुस गर्नुपर्छ कि तिनीहरू आफ्नो आवश्यकताहरू पूरा गर्न सही ठाउँमा छन्। त्यहाँ एक ब्रान्ड को व्यक्तिगत घटक वरिपरि अनुसन्धान को एक विशाल क्षेत्र छ; रङ, लोगोको आकार र फन्ट।
निस्सन्देह नामले पनि ठूलो सम्झौता गर्न सक्छ। तर एक सरल टिप जुन ब्रान्डिङको साथ कहिल्यै बेवास्ता गर्नु हुँदैन, स्थिरता हो। तपाइँको सबै अनलाइन प्लेटफर्महरूमा तपाइँको ब्रान्डिङ एकरूपता राख्नु, र तपाइँको अफलाइन संसार पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यो स्थिरताले मानिसहरूलाई देखाउँछ कि तपाइँ राम्रोसँग संचालित व्यवसाय चलाइरहनुभएको छ। यसको विपरित, तपाईंको जीमेल खाताबाट ग्राहक सेवा इमेल जवाफ बन्द गर्नाले तपाईंको ब्रान्डलाई तल झर्ने छ। सधैं एक व्यापार इमेल ठेगाना प्रयोग गर्नुहोस् - यो पनि ब्रान्डिङ को एक महत्वपूर्ण टुक्रा हो।
यसलाई तपाईंको आफ्नै व्यवसायमा ल्याउनुहोस्
तपाइँको सबै मार्केटिङ comms को एक सूची लिनुहोस्; तपाइँको वेबसाइट देखि तपाइँको Twitter हेडर, र तपाइँको इमेल फुटर मा। कुनै पनि पुरानो ब्रान्डिङ अपडेट गर्नुहोस्। तपाईंको वेबसाइटमा फेभिकन जस्ता साना चीजहरू जाँच गर्नुहोस्। हामी समयको साथमा यी चीजहरूमा अन्धा हुन्छौं, तर हाम्रा ग्राहकहरूले ध्यान दिएर, अवचेतन रूपमा पनि, उनीहरूलाई विश्वास गुमाउन सक्छ।
यो सायद सबैको सबैभन्दा कालातीत टिप हो, र यो साँच्चै सामान्य ज्ञान हो। जबकि यो योजना र मार्केटिङ सामग्री सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण छ, तपाईंले हाल अवस्थित सबै प्लेटफर्महरूमा त्यो सामग्री साझेदारी गर्न आवश्यक छैन। वास्तवमा, त्यो तपाईंको लागि समयको निराशाजनक बर्बादी हुनेछ। यसको सट्टा, पत्ता लगाउनुहोस् कुन प्लेटफर्महरूमा तपाइँका ग्राहकहरूले आफ्नो समय बिताउँछन्, र केवल त्यहाँ फोकस गर्नुहोस्।
आफ्नै रणनीति बनाउनुहोस्
भर्खरको प्रवृतिमा उफ्रिनुको सट्टा, आफ्नो ग्राहक अवतारबाट नेतृत्व लिनुहोस्। के तिनीहरू मध्यम उमेरका व्यापारीहरू हुन्? त्यसपछि LinkedIn मा फोकस गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। के तिनीहरू सहस्राब्दी हुन्? त्यसपछि TikTok र Instagram प्रयास गर्नुहोस्। तर सबै सामाजिक प्लेटफर्महरूमा हुने प्रयास नगर्नुहोस्। यहाँ रणनीतिक हुनुहोस् र आफैलाई धेरै बहुमूल्य समय बचत गर्नुहोस्।
संक्षेपमा, राम्रो मार्केटिङ रणनीतिले तपाइँलाई चौबीसै घण्टा काम नगरीकन प्रति हप्ता सात दिन नतिजाहरू प्रदान गर्नेछ। जब तपाइँ सबै ठाउँमा हुन कोशिस गरिरहनु भएको छैन, तपाइँ सही ठाउँहरूमा बढी केन्द्रित र प्रभावकारी हुन सक्नुहुन्छ। तपाईंको ब्रान्डमा त्यो स्थिरता विश्वास निर्माण गर्न र सही व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। र संचारमा ध्यान केन्द्रित गरेर, तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु लाई मुख को शब्द मार्फत केहि मार्केटिङ गर्न मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको प्रयासले तपाईलाई अन्तमा फिर्ता दिनेछ।